देवर भाउ’जूको अवैध सम्बन्धः भा’उजू भन्छिन्, ‘म’दिराले लठ्ठ भएका बेला …. – hamrosandesh.com
देवर भाउ’जूको अवैध सम्बन्धः भा’उजू भन्छिन्, ‘म’दिराले लठ्ठ भएका बेला ….
विगत तीन वर्षदेखि श्री’मान् वि’देशमा छन् । दे’वर सधैँ घरमा आइरहन्थे । मदि’राले ल’ठ्ठ भएका बेला के–के भयो के के’ आफ्नै पेटमा हु’र्किरहेको चार म’हिनाको ग’र्भपतन गरी टालोमा बेरेर घर छेउको बारीमा गाडेपछि उनले जे’ठानी’सँग भनेकी थिइन् ‘लुका’उन पर्ने भएकाले लुका’एकी हुँ ।’
बाग’लुङको जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीकी २६ वर्षीया महिलाले ग’र्भप’तन गराएर गाडेको ब’च्चाको विषयमा खोजी भयो । प्र’हरीले सोधपुछ गर्ने क्र’ममा बा’बुको विषयमा बताएपछि उनले जे’ठानीसँग भनेकोजस्तै आफ्नै देव’र नाता लाग्ने व्यक्ति प’क्राउ परे । दे’वर भा’उजूको अ’वैध सम्बन्धबाट ग’र्भ रहेकाले समाजमा मुख देखाउन कठिन हुने भन्दै उनले ग’र्भ’पतन गराएर गाडेको अनुमान प्रहरीको छ ।
‘दुई पटक’सम्म शा’री’रिक सम्बन्ध भएको हो, बाँकी के–के भयो थाहा भएन’, प्रह’रीसँगको बयानमा प’क्रा’उ परेका दे’वरले भनेका छन्, ‘सहमतिकै कुरा हो, जब’र्ज’स्ती गरेको होइन ।’
यही प्रमाणका आधारमा प्र’हरीले भ्रू’ण ह”त्या गरिएको आ’रोप’मा जैमिनी–१० राङ्खानीकी ती महिला र उनको दे’वर ना’ता’ पर्ने ३१ वर्षीय पुरुषवि’रुद्ध मु’द्दा द’र्ता गरेको छ । यही साउन ३ गते ती महिलाको घरदेखि केही पर भ्रू’ण ह’त्या गरेर गाडेको भेटिएको थियो । उनीहरु दु’वैविरु’द्धमा भ्रूण हत्याको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पुरुषजस्तो देखिने भ्रू’णलाई रा’तो टा’लोमा बेरेर मा’टोमुनि गा’डिएको अव’स्थामा फे’ला पा’रिएको प्रह’री उप’रीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । ‘दुवैले कमजोरी स्वी’कार गरेकाले मु’द्दा द’र्ता भएको छ’, पल्लीमगरले भने, ‘अनु’सन्धा’न बाँकी छ, हामी प्रक्रियामै छौँ ।’
प’क्रा’उ परेका दु’वैलाई म्याद थप गरी थु’नामा राखिएको छ । प’क्रा’उ परेकामध्ये भा’उजूका पाँच वर्षकी छोरी र तीन वर्षका छोरा छन् । देवरका १२ र दुई वर्षका दुई छोरी छन् । दु’वै जना वि’वाहित हुँदाहुँदै अ’वैध सम्ब’न्ध राखेकै का’रण घट’ना भएको पल्लीमगर बताउँछन् ।
‘लामो समय श्री’मान् विदेशमा रहेकाले देवर ना’ता पर्ने भा’उजूको घरमा आउजाउका कारण ना’जाय’ज स’म्बन्ध रहेको पाइयो’, पल्लीमगरले भने । उनीहरुको सम्ब’न्धको विषयमा पहिलेदेखिनै शं’का गरेका परिवारका सदस्य र गाउँलेले पछ्याउँदा उनले अ’वैध ग’र्भप’तन गरेर गा’डेको अवस्था’मा फे’ला परेको थियो ।